Ukuzingela nokudoba abakhileyo eSiberia akuzona kuphela fun, kodwa futhi ngokudoba. Nature kwakuyodingeka, kuba kulezi zindawo ageleze emfuleni ngobukhulu kuleli zwe, kukhona amahlathi amakhulu lapho izilwane zasendle eziningi kutholakala. Abantu asesabi ngisho kunzima kakhulu ukuphila kuyo emvelweni, bazimisele ukubekezelela ukuze nibambe enhle noma ukukhiqizwa ukuzingelwa kubo.
Izici ukudoba eSiberia
Ukuzingela kanye nokudoba eSiberia kungenzeka nganoma isiphi isikhathi sonyaka. Fish kungaba zonke izinhlobo igiya, ezingalotshwanga kunqatshelwe ngokomthetho. Ngo amanzi kule ndawo itholakala lenqwaba kwezinhlobo zezinhlanzi. It kuphela uhlala ukukhetha igiya futhi baqala ekubambeni. Le catch kungaba abavamile noma lithunjwa. Ikakhulukazi ukudoba like izivakashi kweziningi zalezi zindawo, njengoba ezinye izinhlobo zezinto eziphilayo izinhlanzi abawubonanga nhlobo noma kuphela kubonakala ku esitolo emashalofini, kodwa ukubamba la ubuhle kungaba kuphela kulezo zindawo amahle.
Lapho ukudoba eSiberia
Ukuzingela nokudoba eSiberia ebusika kuyinto ethokozisayo kakhulu kokubili ochwepheshe kanye nayizimfundamakhwela. Ukudoba lapha kungaba hhayi kuphela ngemifula namachibi, kodwa futhi phezu ikhokhwe amadamu yokufakelwa. Fish bangakwazi ukubamba emikhulu a kakhulu, futhi izinga lenkonzo nenduduzo kuyoba at kokuwa. Njengomthetho, amadamu enjalo ukwakha lonke nokungcebeleka.
Ukuzingela nokudoba eSiberia bayakwazi enchant futhi bathumbe ngisho labo kuze kube yilesi sikhathi babengazange bahlanganyele ibhizinisi efanayo. Misela lapha Trophies kuqala ushiye umbono ongenakulibaleka ukuphila futhi baphoqeleka ukuba baphindele kule ndawo futhi.
Ukuzingela nokudoba ebusika
Uma umuntu ecabanga ukuthi ukuzingela ebusika nokudoba e-East eSiberia ebusika kungukuthi kwenziwe ngenxa ukubanda okwedlulele, nguye iphutha ngokujulile. Vele le nkathi futhi kakhulu asebenzayo abazingeli wendawo nabadobi. Kulokhu, kubonelelwa kakhulu ama-ekuzingeleni njengenhlangano ebusika isilwane liphelile, noboya yakhe ibalulekile kakhulu. Yebo, futhi abale iba lula kakhulu.
Ukuzingela nokudoba eSiberia ebusika athandwa kakhulu ngokuyinhloko ngenxa ukukhiqizwa ngalesi sikhathi kuba lula, uma ahlele kahle inqubo bese ukhetha igiya edingekayo. Nokho, akunakusetshenziswa akufanele ukunganakwa imithetho ukuphepha kanye wedwa uya endaweni ongayazi.
Ukuzingela nokudoba eSiberia, edonsa hhayi bendawo kuphela, kodwa futhi izivakashi ezivela kwezinye izifunda zezwe lethu. Ezinye zazo ukuhamba izinkulungwane amakhilomitha inyamazane athandwayo catch noma. Mayelana ukuzidela abazingeli nabadobi endaweni esingu eziningi vidiyo. Isiza iqiniso lokuthi wayengahamba uzilungiselele kusenesikhathi noma yini engase bemlindile kulezi zindawo. Ngemva eSiberia - ke liyinqolobane wangempela izipho zemvelo hhayi kuphela, kodwa futhi nempilo. Chitha isikhathi lapha noma kunjalo ngeke kahle wachitha uzokunika eziningi imizwelo eyakhayo. Qoqa imishini, eqondisa amakhadi - nokudlulisa, ngase adventure!
Ngezibungu - a ngezibungu ...: zizalela, isitoreji
Indlela yokusetha imakrofoni ku-Windows 7: Imfundo
AVZ - kuyini? AVZ - antivirus Umbuso
"ALMEDIS" insimbi. Izibuyekezo ezingezinhle - kuze kufike lapho luhambisane ngokoqobo? "ALMEDIS": isicelo, intengo